Importance of fetal kick count - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ဒီဆောငျးပါးမှာတော့ မမေတေို့သိသငျ့တဲ့ ကလေးလှုပျခွငျးအကွောငျးကို အမေးအဖွလေေးတှနေဲ့ ရေးသားပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
*Fetal kick counting/ကလေးလှုပျတာကိုမှတျရမယျ ဆိုတာဘာလဲ?
ကလေးလှုပျခွငျးကို မှတျတာဟာ အသကျမပါတဲ့ကလေး (Still birth) တှမှေေးခွငျးကို ကာကှယျတဲ့နညျးတဈမြိုးပါပဲ။ ကိုယျဝနျ ၂၈ပတျကနေ ကလေးမှေးတဲ့အထိ ကွားထဲမှာ နစေ့ဉျကလေးလှုပျရှားမှုကို မှတျသားထားရပါတယျ။ ပုံမှနျလိုလှုပျရှားမှုမရှိတော့ဘူးဆိုရငျ ဆေးရုံ၊ဆေးခနျးအမွနျဆုံးသှားရောကျရပါတယျ။
*ကလေးလှုပျခွငျးကို မှတျသားတာဟာ ဘာကွောငျ့အရေးကွီးတာလဲ?
ကလေးလှုပျတာ ပုံမှနျမဟုတျခွငျးဟာ ကိုယျဝနျနှဈဆယျ့ရှဈပတျနောကျပိုငျးမှာဖွဈတတျတဲ့ Fetal Distress (ကလေးမှနျးခွငျး)အခွအေနရေဲ့ အစောပိုငျးလက်ခဏာတဈခုဖွဈနလေို့ပါပဲ။ပုံမှနျမှတျသားထားရငျ မိခငျဟာ ကလေးပုံမှနျဟုတျမဟုတျ သိနပေါတယျ။ တကယျလို့ ကလေးမလှုပျတာဆိုရငျလညျး ပုံမှနျမှတျသားထားတဲ့မိခငျက တနျးသိပါတယျ။
အမွဲတမျးလှုပျရှားတကျကွှပွီး ဗိုကျကိုကနျနတေတျတဲ့ ရငျသှေးလေးတှကေို လှယျထားရတဲ့ မမေတှေလေညျးရှိပါတယျ။ အဲလိုမမေတှေကေလညျး ကလေးဟာ အမွဲလှုပျနတေတျတာပဲဆိုပွီး ပေါ့ဆလို့မရပါဘူး။ Active baby ဟာလညျး Distress ရနိုငျပါတယျ။ ဒီလိုပုံမှနျမှတျသားမှသာ အမွဲတကျကွှနတေဲ့ရငျသှေးလေး မတျောမဆနှေးကှေးနတေဲ့အခါ သတိပွုနိုငျမှာပါ။
*Fetal kick count ကိုဘယျလိုမှတျရမလဲ?
ကလေးလှုပျခွငျးကို မှတျတဲ့နညျးလမျးတှမြေိုးစုံရှိကွပါတယျ။ ခုကတော့ Count to Ten ဆိုတဲ့ Method လေးကိုဖျောပွပေးခငျြပါတယျ။
(၁)တဈနကေို့တဈကွိမျမှတျရမှာဖွဈပါတယျ။ ညနစောစားပွီး ညနဘေကျစောစောအခြိနျဟာ ကလေးတှေ active ဖွဈတတျလို့ သငျ့လြျောပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကလေးတှဟော တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ မတူကွလို့ ကိုယျ့ရဲ့ကလေးလေး ဘယျခြိနျမှာ အတကျကွှဆုံးလဲဆိုတာ မမေတေို့ကသာအသိဆုံးဖွဈမှာပါ။ အဲဒီအခြိနျကိုရှေးပွီး နစေ့ဉျအခြိနျကိုပုံမှနျသတျမှတျပွီး မှတျသားပေးရပါမယျ။
(၂)စာရှကျ၊မှတျဖို့ ဘောပငျနဲ့ နာရီလိုပါတယျ။
(၄)ကလေးလှုပျရငျ၊ကနျရငျ၊ ခုနျရငျ၊လူးသှားရငျ တဈခုကွုံတာနဲ့ အမှတျတဈမှတျခွဈပါ။
(၆)စံအနနေဲ့တော့ ဆယျကွိမျကို နှဈနာရီအတှငျးပွညျ့ရပါတယျ။
*ဘယျအခြိနျမှာ ဆရာဝနျဆီ အမွနျဆုံးပွသမလဲ?
ကလေးလှုပျတဲ့ပုံစံဟာ တျောတျောကဆြငျးပွီး ပွောငျးလဲနရေငျ ကလေးဟာ ပုံမှနျမဟုတျဘဲ တဈခုခုနမေကောငျးတာ ငွိမျနတောကိုပွသခွငျးဖွဈနိုငျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ မမေတေို့အနနေဲ့ ကနျြးမာတဲ့ရငျသှေးလေးကို မှေးဖှားဖို့ သူ့ကိုဂရုတစိုကျနဲ့ စောငျ့ကွညျ့နဖေို့လညျး လိုအပျတဲ့အကွောငျး ရေးသားလိုကျရပါတယျ။
ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ မေမေတို့သိသင့်တဲ့ ကလေးလှုပ်ခြင်းအကြောင်းကို အမေးအဖြေလေးတွေနဲ့ ရေးသားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
*Fetal kick counting/ကလေးလှုပ်တာကိုမှတ်ရမယ် ဆိုတာဘာလဲ?
ကလေးလှုပ်ခြင်းကို မှတ်တာဟာ အသက်မပါတဲ့ကလေး (Still birth) တွေမွေးခြင်းကို ကာကွယ်တဲ့နည်းတစ်မျိုးပါပဲ။ ကိုယ်ဝန် ၂၈ပတ်ကနေ ကလေးမွေးတဲ့အထိ ကြားထဲမှာ နေ့စဉ်ကလေးလှုပ်ရှားမှုကို မှတ်သားထားရပါတယ်။ ပုံမှန်လိုလှုပ်ရှားမှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင် ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းအမြန်ဆုံးသွားရောက်ရပါတယ်။
*ကလေးလှုပ်ခြင်းကို မှတ်သားတာဟာ ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ?
ကလေးလှုပ်တာ ပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းဟာ ကိုယ်ဝန်နှစ်ဆယ့်ရှစ်ပတ်နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တတ်တဲ့ Fetal Distress (ကလေးမွန်းခြင်း)အခြေအနေရဲ့ အစောပိုင်းလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ပုံမှန်မှတ်သားထားရင် မိခင်ဟာ ကလေးပုံမှန်ဟုတ်မဟုတ် သိနေပါတယ်။ တကယ်လို့ ကလေးမလှုပ်တာဆိုရင်လည်း ပုံမှန်မှတ်သားထားတဲ့မိခင်က တန်းသိပါတယ်။
အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားတက်ကြွပြီး ဗိုက်ကိုကန်နေတတ်တဲ့ ရင်သွေးလေးတွေကို လွယ်ထားရတဲ့ မေမေတွေလည်းရှိပါတယ်။ အဲလိုမေမေတွေကလည်း ကလေးဟာ အမြဲလှုပ်နေတတ်တာပဲဆိုပြီး ပေါ့ဆလို့မရပါဘူး။ Active baby ဟာလည်း Distress ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုပုံမှန်မှတ်သားမှသာ အမြဲတက်ကြွနေတဲ့ရင်သွေးလေး မတော်မဆနှေးကွေးနေတဲ့အခါ သတိပြုနိုင်မှာပါ။
*Fetal kick count ကိုဘယ်လိုမှတ်ရမလဲ?
ကလေးလှုပ်ခြင်းကို မှတ်တဲ့နည်းလမ်းတွေမျိုးစုံရှိကြပါတယ်။ ခုကတော့ Count to Ten ဆိုတဲ့ Method လေးကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
(၁)တစ်နေ့ကိုတစ်ကြိမ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ညနေစာစားပြီး ညနေဘက်စောစောအချိန်ဟာ ကလေးတွေ active ဖြစ်တတ်လို့ သင့်လျော်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူကြလို့ ကိုယ့်ရဲ့ကလေးလေး ဘယ်ချိန်မှာ အတက်ကြွဆုံးလဲဆိုတာ မေမေတို့ကသာအသိဆုံးဖြစ်မှာပါ။ အဲဒီအချိန်ကိုရွေးပြီး နေ့စဉ်အချိန်ကိုပုံမှန်သတ်မှတ်ပြီး မှတ်သားပေးရပါမယ်။
(၂)စာရွက်၊မှတ်ဖို့ ဘောပင်နဲ့ နာရီလိုပါတယ်။
(၄)ကလေးလှုပ်ရင်၊ကန်ရင်၊ ခုန်ရင်၊လူးသွားရင် တစ်ခုကြုံတာနဲ့ အမှတ်တစ်မှတ်ခြစ်ပါ။
(၆)စံအနေနဲ့တော့ ဆယ်ကြိမ်ကို နှစ်နာရီအတွင်းပြည့်ရပါတယ်။
*ဘယ်အချိန်မှာ ဆရာဝန်ဆီ အမြန်ဆုံးပြသမလဲ?
ကလေးလှုပ်တဲ့ပုံစံဟာ တော်တော်ကျဆင်းပြီး ပြောင်းလဲနေရင် ကလေးဟာ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ တစ်ခုခုနေမကောင်းတာ ငြိမ်နေတာကိုပြသခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မေမေတို့အနေနဲ့ ကျန်းမာတဲ့ရင်သွေးလေးကို မွေးဖွားဖို့ သူ့ကိုဂရုတစိုက်နဲ့ စောင့်ကြည့်နေဖို့လည်း လိုအပ်တဲ့အကြောင်း ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
Should infant’s hair be shaved or not?